The MYAWADY Daily: July 2015
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အား ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr.Narendra Modi အား ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်စဉ်
နေပြည်တော် ၊ ၃၁-၇-၂ဝ၁၅
အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ရောက်ရှိနေသော တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E.Mr.Narendra Modi အား ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီ ၄ဝ မိနစ်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်၏အိမ်တော်၌ သွားရောက် ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ် တင်အောင်စန်း နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးအောင်ခင်စိုး တို့ တက်ရောက် ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က သမိုင်းကြောင်း ရှည်လျားစွာ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု ရှိခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူများ၏ ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး ရှိကြောင်း၊ တပ်မတော် နှစ်ရပ်၏ ကာကွယ်ရေး နှင့်လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုမြှင့်တင် ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည် ပါကြောင်း၊ မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယတို့၏ တူညီသော စိန်ခေါ်မှု နှစ်ရပ်မှာ နယ်စပ် တည်ငြိမ်မှု နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်မှု နှစ်ရပ်စလုံးကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ အနောက်တံခါး ပေါက်အဖြစ် Geopolitic အရ Strategic ကျကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအရ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး၊ နိုင်ငံအားလုံးနှင့် မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံရေးကို အလေး ထားကြောင်း၊ အိန္ဒိယ၏ Act East Policyအရ အာရှနိုင်ငံ များနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ပေါင်းကူး သဖွယ် ဆက်စပ်ကူညီ နိုင်သည့် အနေအထား ရှိကြောင်း၊ အဆွေတော် ဝန်ကြီးချုပ်၏ ပင်လယ် ရေကြောင်းခရီး သွားလာရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ထောက်ခံပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ထံတင်ပြ၍ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စများ ကိုလည်း ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အဓိကမှာ နှစ်နိုင်ငံ ယုံကြည်မှု ရှိရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံသည် အသွင် ကူးပြောင်းစ ကာလဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု နှင့် စီးပွားရေး ကောင်းမွန်မှု အတွက် နိုင်ငံတော် အစိုးရ အပိုင်းက ဆောင်ရွက နေပြီး တပ်မတော် အနေဖြင့် အစိုးရကို အကူအညီ များပေးနေ ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေဖြင့် ပြည်သူများ တောင်းဆို ထားသည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ပေးထားပြီး နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ ယိမ်းယိုင်ခြင်း မရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မကြာခင် ဆောင်ရွက်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုလည်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုရှိအောင် ကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် က နယ်စပ်ရေးရာ ကိစ္စများကို နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် နယ်မြေ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ Act East Policy ကို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှုသည် အောင်မြင်ပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ဆက်ဆံနိုင် ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှု များလည်း အောင်မြင်မှု ရှိကြောင်း၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာ၊ တရုတ်နှင့် အရှေ့အာရှ နိုင်ငံများသို့ ကားလမ်း၊ မီးရထား လမ်းများ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လေကြောင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စ နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍတွင် လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍနှင့် ပင်လယ် ရေကြောင်း ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် ခရီးသွားလာမှု များလာပြီး ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက် လာနိုင်ကြောင်း၊ ASEAN SUMMIT တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Geopolitic အရေးပါမှုကို လက်တွေ့ လေ့လာ နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာတွင် ကောင်းမွန်သည့် Potential များရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ရကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း လျှောက်လှမ်းမှု အပိုင်းတွင် ယုံကြည်ချက် ရှိသည့်အတိုင်း ပြောဆို လုပ်ကိုင်နေမှုကို ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍစုံတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မြှင့်တင် နိုင်မည်ဟု ယုံကြည် ပါကြောင်းဖြင့် ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Narendra Modi တို့သည် အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်နှင့် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ အပြန်အလှန် ပေးအပ် ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ တပ်မတော်( ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် လေတပ်ဦးစီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကို ခံယူစဉ်
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံတပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် လေတပ် ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Arup Raha,PVSM, AVSM,VM တို့ အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် နှင့် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ အပြန်အလှန် ပေးအပ်စဉ်
အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ သို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ရောက်ရှိနေသော တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် လေတပ် ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Arup Raha,PVSM, AVSM,VM က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ ဖြင့် ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန South Block Lawns ရင်ပြင် မြက်ခင်းပြင် ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
ရှေးဦးစွာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားသို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် လေတပ် ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Arup Raha,PVSM, AVSM,VM က ရင်းနှီးခင်မင်စွာ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊လေ) ဂုဏ်ပြု တပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြု ခြင်းကို ခံယူပြီးနောက် ဂုဏ်ပြု တပ်ဖွဲ့အား ဆက်လက် စစ်ဆေးခဲ့ကာ အခမ်းအနား တက်ရောက် လာသူများနှင့် အပြန်အလှန် မိတ်ဆက် ပေးသည်။
၄င်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် လေတပ် ဦးစီးချုပ် တို့သည် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် လေတပ် ဦးစီးချုပ်ရုံး၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အတူ မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ကြပြီး အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊လေ) ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် လေတပ် ဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ Air Marshal PP Reddy ၊ Lt. Gen Bhalla ၊ Vice Admiral G Luthra နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က တပ်မတော် နှစ်ရပ် ချစ်ကြည်ရေး ခိုင်မာ လာစေရန်နှင့် နယ်ပယ် အားလုံးတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရန် လာရောက်သည့် ခရီးစဉ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘန်ဂလို နှင့် ဂိုအာတို့တွင် အိန္ဒိယ တပ်မတော်၏ လေယာဉ်နှင့် Naval Aviation ကိစ္စများ၊ Shipyard နှင့် Port များ၊ Information Management and Analysis Center တို့အား လေ့လာနိုင်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် သတင်း ဖလှယ်မှုသည် အရေးကြီးပြီး နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းသားများ ကိုလည်း တိုးမြှင့်စေလွှတ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် Nation Wide Cease Fire ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ရန်ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း အခြေပြုပြီး အိန္ဒိယ အပါအဝင် မည်သည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိခိုက်အောင် လုပ်ဆောင်သည့် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း ကိုမဆို လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ထပ်တူ တည်ရှိ နေသဖြင့် ထိန်းသိမ်းပေး ရမည့်တာဝန် ရှိသည်ဟု ပြောနိုင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိမိတို့ ရပ်တည်ချက် ကိုလည်း ဆွေးနွေး ဖော်ပြခဲ့ ပါကြောင်းဖြင့် ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊ လေ) ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် လေတပ်ဦးစီးချုပ် က ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တပ်မတော် တစ်ရပ်လုံး၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု များကို မြှင့်တင် နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ သင်တန်းသား များကိုလည်း တိုးမြှင့် စေလွှတ်ပေး စေလိုကြောင်း၊ Naval Visit ကိစ္စများ ကိုလည်း တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပြီး ရေကြောင်း ကင်းထောက်နှင့် လေကြောင်း ကင်းထောက် ကိစ္စများ ကိုလည်း လေ့လာ၍ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်နိုင် ပါကြောင်း၊ အကြမ်းဖက် အန္တရာယ် သည် အရေးကြီးသည့် Issue တစ်ရပ်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ Counter Insurgency ကိစ္စအတွက် ကိုလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ IT ကိစ္စများ တွင်လည်း သင်တန်းသားများ စေလွှတ်စေလို ကြောင်းနှင့် တပ်မတော် နှစ်ရပ် ချစ်ကြည်ရေး နှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကို ယခုထက် ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊လေ) ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် လေတပ် ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Arup Raha, PVSM, AVSM,VM တို့သည် အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်နှင့် အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ အပြန်အလှန် ပေးအပ် ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား အိန္ဒိယ တပ်မတော်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက အိန္ဒိယလေတပ် ဦးစီးချုပ်ရုံးရှိ Subroto Hall ၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး အမြင်အား Power Point ဖြင့် အသေးစိတ် ရှင်းလင်း တင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ သဘောထား အမြင်များအား ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Posted by myawady at 10:53 AM No comments:
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၃၁-၇-၂၀၁၅) သောကြာနေ့
Posted by myawady at 10:50 AM No comments:
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်တွင် မွေးသက္ကရာဇ် အမှန် ပြန်လည်ပြင်ဆင် လိုပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီ ခွင့်ပြု
ရန်ကုန် ၊ ၃ဝ-၇-၂ဝ၁၅
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် တွင် မွေးသက္ကရာဇ် အမှန် ပြန်လည် ပြင်ဆင်လိုပါက သတ်မှတ်ချက် နှင့်အညီ ခွင့်ပြု လုပ်ဆောင် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ် ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အခြေခံပညာ မူလတန်း စတင် တက်ရောက်ချိန်တွင် မွေးသက္ကရာဇ်ကို ပြောင်းလဲ၍ ကျောင်းအပ်နှံသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်သည့် အခါ အောင်လက်မှတ် ပေါ်၌ မှားယွင်းသော မွေးသက္ကရာဇ် အချက်အလက်များ ပါလာပါက လုပ်ငန်းခွင် စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုခြင်းနှင့် တခြားသော အလုပ် လျှောက်ထားမှု များတွင် ထိခိုက် နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
''မွေးတဲ့လ အမှန်အတိုင်း ဖြည့်ရင် ကျောင်းဝင်ခွင့် မရမှာစိုးလို့ တစ်နှစ်အောက် ရမှာစိုးတဲ့ အတွက် မွေးသက္ကရာဇ်ကို ပြင်ဆင်ပြီး ကျောင်းအပ် ခဲ့တယ်။ ၁ဝ တန်းအောင်လို့ အောင်လက်မှတ်လည်း ထုတ်ရော အဲဒီ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မွေးသက္ကရာဇ် အမှားအတိုင်း ပါသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီဟာက ပြင်ဆင်ထား တဲ့ဟာ ဖြစ်နေတော့ မှတ်ပုံတင် က တကယ့် မွေးသက္ကရာဇ် အမှန်နဲ့ လွဲနေတယ်။ အလုပ် လျှောက်တာတို့၊ ဌာနဆိုင်ရာ တွေကနေ လုပ်ငန်းရာထူး စာမေးပွဲဖြေပြီး အလုပ်ဝင်ခွင့် ရဖို့ ကျမ်းကျိန်ရတော့ အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်'' ဟု ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရ သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကျောင်းစတင် အပ်နှံရာတွင် မွေးသက္ကရာဇ်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက် အစား ရက်ထပ်နှစ်ဟု ထင်၍ ၂၉ ရက်ဖြင့် မှားယွင်း ဖြည့်စွက်ကာ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အောင်မြင် ခဲ့သည်။ သို့သော် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ် များတွင် တက်ရောက် သင်ကြားရန် အောင်လက်မှတ် ထုတ်ယူရာ တွင် မွေးသက္ကရာဇ် မှားယွင်း နေခြင်းကြောင့် အောင်လက်မှတ် မရရှိဘဲ အခက်အခဲများ နှင့် ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့သော မှားယွင်းနေသည့် မွေးသက္ကရာဇ် များနှင့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက် များကို အမှန်ပြင်ဆင် လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဌာနသို့ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် မွေးသက္ကရာဇ်
နှင့် အချက်အလက် များ ပြင်ဆင် လိုသော လျှောက်ထားချက်၊ ကျောင်းဝင် ''ခ'' စာရင်း မိတ္တူများကို တင်ပြ လျှောက်ထား ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်း လျှောက်ထားမှု အပေါ် စိစစ်ကာ အမှန်ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
''တချို့ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေက ဒီလို ပြင်ဆင်လို့ ရတယ်ဆိုတာ သိပ်မသိကြဘူး။ အဲဒီလို သတ်မှတ်ချက် တွေကို ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားရင် ခွင့်ပြုပေး နေပါတယ်'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြား စာစစ်ဦးစီးဌာန များအပါအဝင် စုစုပေါင်း ဖြေဆိုသူ ၅၄၁၉၄၆ ဦးရှိပြီး ၁၇၁၆၄၇ ဦး အောင်မြင်ခဲ့ကာ အောင်ချက် ၃၁ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုသူပေါင်း ၅၉၇၉၄၆ ဦးရှိပြီး ၂၂၄၈၄၇ ဦး အောင်မြင်ခဲ့ကာ အောင်ချက် ၃၇ ဒသမ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူ့ဆေးရုံဝင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးဆိုင်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းရန် ညွှန်ကြားထား
ရန်ကုန် ၊ ၃၀-၇-၂၀၁၅
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဝင်းများအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးဆိုင်များကို လုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့် နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းရန် ညွှန်ကြား ထားကြောင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
ပြည်သူ့ဆေးရုံ ပရိဝုဏ်အတွင်း ဆေးဆိုင်များကို ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူများ အတွက် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများကို ယခုနှစ်အတွင်း ဆေးရုံမှ အခမဲ့ ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိရာ တချို့ လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ ကိုသာ အပြင်ဆိုင်များမှ ဝယ်ယူပြီး ဆေးကုသမှု စရိတ် သက်သာရေး အတွက် အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို မြှင့်တင် ထားသည်။
ထို့အပြင် ဆေးဝါးများကို ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် ရရှိသည့် မြို့နယ်၊ တိုက်နယ် ဆေးရုံများ၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန၊ ဌာနခွဲများကို တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ ဆေးဝါး လိုအပ်ချက် အတိုင်း ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရန် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူ့ဆေးရုံ များရှိ ပုဂ္ဂလိက ဆေးဆိုင်များကို လုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့် နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းရန် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြား ထားပြီး သက်တမ်းတိုး လုပ်ဆောင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ပိတ်သိမ်းခွင့် အမိန့်စာကို ယခုလ အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အရ ပြည်သူ့ဆေးရုံ အသီးသီးသို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လေလံ သက်တမ်း မကုန်မီ အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု ထားသည်။
ယခုနှစ်မှစ၍ ဈေးကွက်တင် ရောင်းချမည့် ဆေးပစ္စည်းများ အတွက် ဆေးပစ္စည်း အရည်အသွေး ကွပ်ကဲရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 2:50 PM No comments:
ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံရေတပ်မှ စစ်ရေယာဉ် ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိ
နေပြည်တော် ၊ ၃ဝ-၇-၂ဝ၁၅
ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံရေတပ်မှ စစ်ရေယာဉ် ROKS Wang Geon (978) သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ် အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၊ သီလဝါဆိပ်ကမ်း MITT တံတားသို့ ယနေ့မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိလာရာ
တပ်မတော်(ရေ) မှ အရာရှိကြီး များနှင့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
အဆိုပါ စစ်ရေယာဉ်တွင် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ရေတပ်မှ Capt Kang Hee Won ဦးဆောင်သော အရာရှိ ၃၃ ဦး၊ စစ်သည် ၂၆၇ ဦး စုစုပေါင်း ၃ဝဝ ဦး လိုက်ပါလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်အထိ သုံးရက်ကြာ နေထိုင်လေ့လာ လည်ပတ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သံလွင်မြစ်ရေ မြင့်တက်မှုကြောင့် ဘားအံမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များ ရေကြီးနစ်မြုပ်
ဘားအံ ၊ ၃၀-၇-၂၀၁၅
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့တွင် ဇူလိုင်လမှ စတင်ပြီး မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် သံလွင်မြစ်ရေ မြင့်တက်လာကာ ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက စိုးရိမ်ရေမှတ် အထက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာမှ ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မိုးထပ်မံ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဘားအံမြို့အနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်များ၌ ရေကြီး နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ရေဘေး စခန်းများသို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့ နေကြောင်း သိရသည်။
သံလွင်မြစ် ကမ်းဘေး ရပ်ကွက်များ ဖြစ်သော အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်နှင့် အမှတ်(၅) ရပ်ကွက် တို့တွင် ရေကြီး နစ်မြုပ်ခဲ့ရာ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ရွှေယဉ်မျှော် ရေဘေးစခန်း၌ အိမ်ထောင်စု ၈၇ စုမှ လူဦးရေ ၄၆၁ ဦး၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်ရှိ အောင်သံလွင် အားကစားရုံ ရေဘေးစခန်း၌ အိမ်ထောင်စု ၈ဝ စုမှ လူဦးရေ ၄၃၃ ဦး၊ မိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံ ရေဘေးစခန်း ၌ အိမ်ထောင်စု ၅၂ စုမှ လူဦးရေ ၂၉၅ ဦးတို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင် ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများ နေရာချထားမှု၊ စားသောက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး တို့အတွက် စီမံ ထားရှိမှု၊ ထပ်မံရောက်ရှိ လာနိုင်သော ရေဘေးသင့် ပြည်သူများကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ် ထားရှိမှုများ နှင့် နယ်မြေခံ တပ်မတော် သားများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့များက ကယ်ဆယ်ရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်နေမှု များကို ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း နှင့် တာဝန်ရှိ သူများက သွားရောက် ကြည့်ရှု အားပေးကာ လိုအပ် သည်များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေး နေကြောင်း သိရသည်။
Labels: တပ်မတော်ရေးရာ, နယ်သတင်း, ပြည်သူ့အကျိုးပြု
တပ်မတော် မြစ်တွင်းသွား ဆေးရုံရေယာဉ် (ရွှေပုဇွန်) ခန္တီးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူ များအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ထွက်ခွာ
တပ်မတော် နယ်လှည့် အထူးကု ဆေးအဖွဲ့သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ခန္တီးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဇူလိုင် ၂၇ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ဧရာဝတီ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှ တပ်မတော် မြစ်တွင်းသွား ဆေးရုံရေယာဉ် (ရွှေပုဇွန်) ဖြင့် ထွက်ခွာသည်။
အဆိုပါ တပ်မတော် မြစ်တွင်းသွား ဆေးရုံရေယာဉ် (ရွှေပုဇွန်) သည် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် မအူပင်မြို့၌ လိုအပ်သော ဆေးဝါးကုသမှု ဆိုင်ရာ ဆေးပစ္စည်းများ တင်ဆောင်၍ ဆက်လက် ထွက်ခွာပြီး ချင်းတွင်း မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ ပြည်သူများအား လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်နယ်လှည့် အထူးကု ဆေးအဖွဲ့တွင် ခွဲစိတ် ပါရဂူများ၊ ဓာတ်မှန် ပါရဂူများ၊ သားဖွားမီးယပ် ပါရဂူများ၊ မျက်စိ ပါရဂူများ၊ ဆေးကုသမှု ဆိုင်ရာ ပါရဂူများ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ပါရဂူများ၊ အရိုးခွဲစိတ် ကုပါရဂူများ၊ သွား၊ မေ့ဆေး ပါရဂူများ၊ ကလေး ပါရဂူများ၊ ဆေးမှူးများ၊ သူနာပြု အရာရှိများ၊ အထက်တန်း သူနာပြုများနှင့် သူနာပြု စစ်သည်များ လိုက်ပါသွား ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Senior General Min Aung Hlaing, delegation visit Army Base Workshop, IMAC Gurgaon in New Delhi
Senior General Min Aung Hlaing exchanging gifts with an Indian official.
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing and Tatmadaw goodwill delegation continued their friendship tour in India, leaving Pune at 7.50 am local standard time yesterday by Indian military aircraft after receivingawarm farewell extended by Chief Operation Officer Group Captain Vij and wife at the airport.
The Senior General and delegation arrived at New Delhi airport at 11 am local standard time, and were welcomed by Air Vice Marshal Shouvik Roy of Indian Airforce and wife and officials.
On arrival at Army Base Workshop in Delhi Cantonment, they were welcomed by its Commandant and Managing Director Brig-Gen Tejinder Jaggi and officials.
At the Conference hall, they attended the power-point presentation on history, structure and capacities of the workshop. After asking for more information, the Senior General exchanged souvenirs.
Later, Brig-Gen Tejinder Jaggi and officials conducted the Senior General and delegation round the workshop.
A welcoming party led by Deputy Chief of Naval Staff Vice Admiral R.K Pattanaik of Information Management and Analysis Centre-IMAC Gurgaon greeted them before they listened to the reports on maritime security, asking for more information and studying the techniques on simulation and system in the afternoon.
In Oval Room at Taj Palace hotel at 4.30 pm, they attended the Biometric System Presentation of Unique Identification Authority of Function during which the Senior General asked for more information. Souvenirs were also exchanged.
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၃၀)
SportsView(Vol 4,No 30)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နယူးဒေလီမြို့သို့ ရောက်ရှိ၊ Army Base Workshop, IMAC Gurgaon တို့အားလေ့လာ
Unique Identification Authority of Function မှ ရှင်းလင်းပြသသော Biometric System Presentation အားကြည့်ရှု လေ့လာပြီး သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းစဉ်။
အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ရောက်ရှိနေသော တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီ ၅ဝ မိနစ်တွင် အိန္ဒိယ တပ်မတော် လေယာဉ်များဖြင့် ပူနေးလေဆိပ် မှ ထွက်ခွာရာ လေဆိပ်တွင် Chief Operation Officer, Group Captain Vij နှင့် ဇနီးမှ ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်သည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် နယူးဒေလီ လေဆိပ်သို့ ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ရောက်ရှိပြီး အိန္ဒိယ တပ်မတော်လေ မှ Air Vice Marshal Shouvik Roy နှင့်ဇနီး၊ တာဝန်ရှိသူ များက ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် လေဆိပ်မှ မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာကြရာ Delhi Cantoment &Sd Army Base Workshop သို့ ရောက်ရှိကြပြီး Army Base Workshop မှ Commandant and Managing Director Brigadier General Tejinder Jaggi နှင့် တာဝန်ရှိ သူများက ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
ထို့နောက် Army Base Workshop နှင့် ပတ်သက်သည့် သမိုင်းကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် များအား တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပါဝါပွိုင့်ဖြင့် Conference hall တွင်ရှင်းလင်း တင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က သိရှိလိုသည့် အချက်များအား မေးမြန်းပြီးနောက် အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်များ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့်
မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား
Information Management and Analysis Centre- IMAC Gurgaon ရှိ
Simulation ခန်းမတွင် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပင်လယ်ရေကြောင်း လုံခြုံရေး
ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း တင်ပြစဉ်
ဆက်လက်၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် Army Base Workshop အတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြရာ Brigadier General Tejinder Jaggi နှင့် တာဝန်ရှိ သူများက လိုက်လံ ရှင်းလင်း ပြသသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် Information Management and Analysis Centre- IMAC Gurgaon သို့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိပြီး IMAC Gurgaon မှ Deputy Chief of Naval Staff Vice Admiral R K Pattanaik နှင့်အဖွဲ့ဝင်များက ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်
Army Base Workshop မှ Commandant and Managing Director Brigadier General Tejinder Jaggi တို့ အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်များ အပြန်အလှန် ပေးအပ်စဉ်
ဆက်လက်၍ Simulation ခန်းမတွင် ပင်လယ် ရေကြောင်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှု များအား တာဝန်ရှိ သူများက ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များက သိရှိလို သည်များကို မေးမြန်းကာ Simulation နှင့် System ဆိုင်ရာများအား ကြည့်ရှု လေ့လာ၍ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်သို့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် Taj Palace ဟိုတယ် Oval Room တွင် Unique Identification Authority of Function မှ ရှင်းလင်း ပြသသော Biometric System Presentation အား ကြည့်ရှု လေ့လာပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က သိရှိ လိုသည်များ မေးမြန်းကာ အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ အပြန်အလှန် ပေးအပ် ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ် ၊ စာ(၃၂/၁၇)
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၃၀-၇-၂၀၁၅) ကြာသပတေးနေ့
ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာ များနှင့် အ၀တ်အထည်များအား တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ် များဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး
တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ် များဖြင့် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာ များနှင့် အ၀တ်အထည်များ ပို့ဆောင်ပေးစဉ်
နေပြည်တော် ၊ ၂၉-၇-၂၀၁၅
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေနစ်မြုပ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ပြတ်တောက်ဆဲ ဖြစ်သော ကျေးရွာများ အတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာ များနှင့် အဝတ်အထည် များအား ခရိုင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံမှုဖြင့် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကန့်ဘလူမြို့မှ ကောလင်းမြို့သို့ အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မင်းနောင် ဦးစီး၍ တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုကာ ပို့ဆောင် ပေးပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ချောင်းနား ကျေးရွာသို့ လေးကြိမ် ပို့ဆောင် ပေးသည်။
ထို့နောက် တိုင်းမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူ များသည် ဒေါင်းမြူးချောင်း ရေမြင့်တက် နေမှုကြောင့် ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ ဝန်းသိုမြို့ ကြိုးကြာ ရပ်ကွက်နှင့် ကျမိုင်းကုန်း ရပ်ကွက် အတွင်း ရေ ၃ ပေခန့် မြင့်တက်နေမှု အား လည်းကောင်း၊ကောလင်း မြို့နယ်၊ ကျခတ်အိုက် ကျေးရွာအနီး ဒေါင်းမြူးချောင်း တံတား၏ ချဉ်းကပ်လမ်း ရေကျော် ပျက်စီးနေမှု အား လည်းကောင်း၊ ရေနစ်မြုပ် ခဲ့သည့် ကြို့ခုန်ကျေးရွာ နှင့် ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာများတွင် ရေတွင်းများ ဆေးခတ်ခြင်း ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုတို့ အား လည်းကောင်း သွားရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး ကျေရွာနေ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သတိပြု ရမည့် အချက်များ ဆွေးနွေး မှာကြားသည်။
ကောလင်းမြို့နယ် အတွင်း မြို့နယ်ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံ ခန့်ခွဲမှုဖြင့် လိုအပ်သော စားသောက် ဖွယ်ရာများ၊ ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးများအား တပ်မတော် အသက်ကယ် လှေများ၊ မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် ပို့ဆောင် ပေးလျက် ရှိသည့်အပြင် တပ်မတော်မှ ဆေးကုသရေး အဖွဲ့များနှင့် မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ရေကျဆင်း သွားပြီးဖြစ်သည့် ကျေးရွာများတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းနှင့် ရေတွင်း ရေကန်များအား ရေသန့်ဆေး ခတ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပေးသည်။
အလားတူ ရွှေဘို တပ်နယ်ရှိ နယ်မြေခံ တပ်မတော်သား များက မင်းမြင် တမံလမ်းပေါ်ရှိ နုန်းမြေများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ အရာတော် တပ်နယ်ရှိ နယ်မြေခံ တပ်မတော်သား များက အရာတော်- ရွှေဘို ကားလမ်းပေါ်ရှိ ဇရစ်ကျေးရွာ နှင့် ကူးတုတ်ကိုင်း ကျေးရွာအကြား ရေကျော်မှု ဖြစ်ပေါ်ရာ နေရာများသို့ လမ်းပခုံးသားများ ပျက်စီးမှု မရှိစေရေး သဲအိတ်ချခြင်း နှင့် မြေသားဖို့ခြင်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
ထို့အတူ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့တွင် ဇူလိုင် ၂၆ ရက်နှင့် ၂၇ ရက်က မိုး အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြစ်သာမြစ်ရေ မြင့်တက်လာပြီး ကလေးမြို့ရှိ အောင်မြေမာန် ရပ်ကွက်၊ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာ ဥယျာဉ် ရပ်ကွက်၊ ညောင်ပင်သာ ရပ်ကွက်၊ ကျီကုန်းကျေးရွာ၊ ရေလဲဦးကျေးရွာ၊ စည်သာကျေးရွာ၊ နတ်ကြီးကုန်း ကျေးရွာ၊ ဖောင်းကူးကျေးရွာ၊ ပြင်သာကျေးရွာ နှင့် တောင်ဦးကျေးရွာ တို့တွင် ရေကြီး ရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် နေရာများမှ အိမ်ထောင်စု ၅၆ဝ စု၊ လူဦးရေ ၂၄၄၅ ဦးတို့အား အနောက် မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ တပ်မတော်သား များက ရေဘေးလွတ်ရာ နေရာများသို့ ရွှေ့ ပြောင်းပေးခြင်းနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ သွားရောက် ပို့ဆောင် ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပေးသည်။
အဆိုပါ မြစ်ရေကြီးမှုကြောင့် လူ ၊ တိရစ္ဆာန်များ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု များမရှိဘဲ ကလေး- ကျီကုန်းကားလမ်း ပေါ်သို့ ရေ ၃ ပေခန့် မြင့်တက်မှုကြောင့် မော်တော်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်း သွားလာနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Senior General Min Aung Hlaing and delegation visit TA TA MOTORS in Pune
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing and Tatmadaw goodwill delegation who were onafriendship visit in India arrived at Pune airport at 2:30 pm local standard time yesterday. They were warmly welcomed by Chief Operation Officer Group Captain Vij of Airforce Station Pune and wife.
The Senior General and delegation left the airport at 3:10 pm and arrived at TA TA MOTORS Limited aftera30 minutes drive. Executive Director Mr. Ravi Pisharody of the company and officials welcomed them.
After attending the power-point presentation of the company, they were conducted round the production line.
TA TA MOTORS is one of the internationally based car manufacturing companies in India andabranch of TA TA Group. It is the 17 largest car manufacturer in the world and is globally ranked fourth in truck production and second in bus production.
The Senior General and delegation left the company and arrived at JW Marriott hotel where they would temporary stay at6pm.
In the evening they attended dinner hosted by Executive Director Mr. Ravi Pisharody and wife in their honor at the hotel. The Senior General and Mr. Pisharody gave speeches and exchanged souvenirs. Country music was played before and after the dinner.
The Myawadydaily, Page(18)
သုံးနှစ်အတွင်း စားသုံးရန်မသင့်သည့် အေးခဲအသား တန်ချိန် ၁၇၀ နီးပါးဖမ်းမိ
အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ထောက်ခံချက် မပါဘဲ နယ်စပ်ဒေသ များမှ တရားမဝင် ဝင်ရောက် လာသော စားသုံးရန် မသင့်သည့် အေးခဲအသား တန်ချိန် ၁၇ဝ နီးပါးကို သုံးနှစ်အတွင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟို၊ Mobile Team များမှ ဖမ်းဆီးနိုင် ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် များအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ အများအပြား နှင့် ထိစပ် နေခြင်းကြောင့် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း များမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ စားသုံးရန် မသင့်သည့် အစား အသောက်နှင့် ဆေးဝါးများ၊ အေးခဲအသားများ ဝင်ရောက် နေခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်း ကုန်ပစ္စည်း များကို Mobile Team များက တားဆီး စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ အေးခဲအသား တန်ချိန် ၁၆၉ တန် ခန့်မှန်း တန်ဖိုး ငွေကျပ်သန်း ၆၆၃ သန်းခန့်ကို သုံးနှစ်အတွင်း တားဆီး နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အေးခဲအသားများ ဖြစ်သော ကြက်သား၊ ကြက်အသည်း အမြစ်၊ အကင်မျိုးစုံ ပြုလုပ်ရန် ပစ္စည်းများမှာ နယ်စပ် လမ်းကြောင်းများမှ ပုံစံအမျိုးမျိုး ဖြင့် ဝင်ရောက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး အမှုတွဲပေါင်း ၁၅၂ ခု ဖွင့်ကာ ပစ္စည်း များကို သိမ်းဆည်း၍ ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အေးခဲအသား များသည် စားသုံးသူကို ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပြီး စားသုံးသူ အကာအကွယ် ပေးရန်နှင့် တရားမဝင် အကောက်ခွန်မဲ့ တင်သွင်းမှု များကို Mobile Team များမှ တားဆီး ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကာ နယ်စပ် အပါအဝင် ပင်လယ် ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်း မှဝင်ရောက် လာသည့် တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုကို စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Mobile Team များ ဖွဲ့စည်းကာ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ စစ်ဆေး အရေးယူခဲ့ခြင်း ကြောင့် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏများ တိုးတက်လာ ခဲ့ပြီး စားသုံးသူ အကာအကွယ် ပေးရေး လုပ်ငန်း များလည်း ထိန်းချုပ်လာ နိုင်ကာ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ရှိ လာမည် ဖြစ်ကြောင်း Mobile Team အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
Labels: တားမြစ်ချက်, နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော လူငယ်ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂေါက်သီးရိုက် အားကစားသမားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂ဝ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ The Perfect putter 1st coast Junior open(Hurricane golf Tour) လူငယ် ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂေါက်သီးရိုက် အားကစား သမားများ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၄နှစ် သက်တမ်း ပြိုင်ပွဲတွင် မသင်းဝေခိုင် က ပထမ၊ အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၂ နှစ် သက်တမ်း ပြိုင်ပွဲတွင် မောင်ကောင်းမြတ်ကျော် က ဒုတိယနှင့် မောင်မင်းသံလွင်အောင် က တတိယ၊ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၈ နှစ် သက်တမ်း ပြိုင်ပွဲတွင် မောင်ဇင်အောင်မင်း က အဆင့်(၄)၊ မဝင့်ဖူးနဒီအောင် က အဆင့်(၅) နှင့် မပွင့်ဖူးနဒီခိုင် က အဆင့်(၁၂)၊ အသက်(၁၃) နှစ်မှ ၁၄ နှစ် သက်တမ်း ပြိုင်ပွဲတွင် မောင်စိုင်းအောင်စိုင်ဖ က အဆင့်(၇)တို့ အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြပြီး ဇူလိုင်၂၈ ရက် နံနက်၂ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်သော ဂေါက်သီး အားကစားသမားများ ပေါ်ထွက် လာစေရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဂေါက်သီးအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိ သူများသည် လူငယ် အားကစားသမား များအား ပြုစု ပျိုးထောင်၍ နိုင်ငံတကာ ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်စေလျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
စီးတီးတက္ကစီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်သည့် ယာဉ်များနှင့် သက်တမ်းမတိုးသည့် ယာဉ်များကို ထိရောက်သည့် စစ်ဆေးအရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှု (ဗဟို) ကော်မတီ ခရိုင်ရုံး များတွင် စီးတီး တက္ကစီ မှတ်ပုံတင် သူများနှင့် သက်တမ်းတိုး သူများ များပြားလျက် ရှိသည်။ စီးတီးတက္ကစီ အဖြစ် မှတ်ပုံမတင်သည့် ယာဉ်များနှင့် သက်တမ်း မတိုးသည့် ယာဉ်များကို စစ်ဆေး အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မ-ထ-သ (ဗဟို)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှအောင် က ပြောသည်။
စီးတီးတက္ကစီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း မရှိသည့် တက္ကစီယာဉ် များနှင့် သက်တမ်း မတိုးသည့် တက္ကစီယာဉ် များကို မ-ထ-သ(ဗဟို) စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းပြီး စစ်ဆေး အရေးယူ မှုများပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဇွန်လအတွင်း စီးတီးတက္ကစီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်သည့် တက္ကစီယာဉ် အစီးရေမှာ ၅ဝ၅၁ စီး အထိရှိခဲ့ပြီး သက်တမ်း တိုးသည့် ယာဉ် အစီးရေမှာ ၂၇၆၃ စီးအထိ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်တွင် မှတ်ပုံတင်သည့် ယာဉ်နှင့် သက်တမ်း တိုးသည့်ယာဉ် များ ပိုမို များပြားကြောင်း၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ မှတ်ပုံတင်သည့် ယာဉ်အစီးရေမှာ ၂၅၈၅ အထိရှိပြီး သက်တမ်း တိုးသည့်ယာဉ် အစီးရေမှာ ၁၅၈ဝ အထိရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ စီးတီးတက္ကစီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်သည့် ယာဉ်များနှင့် သက်တမ်း တိုးသည့် ယာဉ်များ ပိုမိုများပြား လာပြီးနောက် စီးတီး တက္ကစီများ စနစ်တကျ ပြေးဆွဲနိုင်ရေး နှင့် နိုင်ငံတကာရှိ တက္ကစီများ နည်းတူ အဆင့်အတန်း မြင့်မား လာရေးကို ဆက်လက်ဦးတည် လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်သည်။
''အခုဇွန်လနဲ့ ဇူလိုင်လတွေမှာ စီးတီး တက္ကစီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်တဲ့ ယာဉ်တွေ၊ သက်တမ်းတိုးတဲ့ ယာဉ်တွေပါ စံချိန်မြင့်တက် လာတယ်။ အရင် နှစ်လသုံးလ စာကို တစ်လတည်းနဲ့ လုပ်ပေး နေရတယ်။ အဲဒီအတွက် စီးတီးတက္ကစီ အဖြစ် မှတ်ပုံ မတင်တဲ့ တက္ကစီယာဉ် တွေကို ထိထိရောက်ရောက် စစ်ဆေး အရေးယူ သွားမယ်'' ဟု မ-ထ-သ(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှအောင် က ပြောသည်။
စီးတီးတက္ကစီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သက်တမ်း တိုးခြင်းနှင့် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ယခင်က ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင် ခဲ့သော်လည်း ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှစ၍ မ-ထ-သ (ဗဟို) သို့ လွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း, နှိုးဆော်သတင်း
ဒဂုံမြို့နယ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ် ၉၃ ရပ်ကွက်အနီး ကျူးကျော် နေထိုင်သည့် အိမ်ခြေများ နှစ်နှစ်အတွင်း ရှစ်ဆနီးပါး တိုးလာ
ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ် ၉၃ ရပ်ကွက်အနီး ကျူးကျော် နေထိုင်သူ များမှာ နှစ်နှစ်အတွင်း အိမ်ခြေ ရှစ်ဆနီးပါး တိုးလာကြောင်း ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း ခရိုင် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီမှ သိရသည်။
ယင်းနေရာတွင် ကျူးကျော် နေထိုင်မှုမှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အိမ်ခြေ ၇ဝဝ ကျော်ခန့်သာ ရှိသော်လည်း ယခုနှစ် အတွင်း အိမ်ခြေ ၅ဝဝဝ ကျော်အထိ တိုးတက် လာခဲ့သည်။
''အခု စီးပွားဖြစ် နေထိုင်သူ တွေများ လာတဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ကိုတင်ပြပြီး အထက်က လမ်းညွှန်ချက် နဲ့ပဲ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားမယ်'' ဟု ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း ခရိုင် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ တာဝန်ခံ ဦးကျော်ဦး က ပြောသည်။
အဆိုပါ ကျူးကျော်မှု များကို ရွှေ့ပြောင်း ပေးရန် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ယခုနှစ်အတွင်း ကြေညာစာ ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ပေးပို့ ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ အချိန်ထိ ပြောင်းရွှေ့ ပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ၄င်းတို့မှာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း မရှိသည့်အပြင် လူဦးရေမှာ ပိုမိုများပြား လာခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ဆက်လက် လုပ်ကိုင် သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ် ၉၃ ရပ်ကွက် အနီးတွင် နေထိုင်သည့် ကျူးကျော်များမှာ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့မှ လာရောက် နေထိုင်သူများ ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများ အနေဖြင့် တရားဝင် နေထိုင်ခွင့်ပြု သင့်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ကျူးကျော် နေထိုင်သူ မိသားစု ၃ဝဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး ယင်း မိသားစုများမှာ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်တွင် အများဆုံး နေထိုင် ကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီမှ သိရသည်။(၄၄၃)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဂိုအာမြို့ India Naval Aviation Squadron ၊ Goa Port နှင့် Goa Shipyard တို့အားလေ့လာပြီး ပူနေးမြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Goa Port ရှိ အိန္ဒိယတပ်မတော် ရေငုပ်သင်္ဘောကို ကြည့်ရှုလေ့လာစဉ်
အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ရောက်ရှိနေသော တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဇူလိုင် ၂၇ ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ ဂိုအာမြို့ရှိ India Naval Aviation Squadron(INS Hansa) သုိ့ သွားရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာ ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ INS Hansa ရှိ လေယာဉ်များကို ကြည့်ရှုလေ့လာစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Goa Port ရှိ အိန္ဒိယတပ်မတော် ရေငုပ်သင်္ဘောကို ကြည့်ရှုလေ့လာစဉ်
ရှေးဦးစွာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် INS Hansa သို့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ရောက်ရှိရာ Fleet Officer, Goa Commanding Area မှ Rear Admiral Ravneet Singh နှင့် တာဝန်ရှိ သူများက ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုကြပြီး Comodore Shalinder Singh က ရှင်းလင်း ဆောင်တွင် INS Hansa နှင့်ပတ်သက်၍ Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များက သိရှိလိုသည့် အချက်အလက် များအား မေးမြန်း ဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် Rear Admiral Ravneet Singh တို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် INS Hansa ရှိ လေယာဉ်များ၊ Goa Port ရှိ အိန္ဒိယတပ်မတော် ရေငုပ်သင်္ဘော တို့အား ကြည့်ရှု လေ့လာသည်။
ဆက်လက်၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နံနက် ၁၁ နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် Goa Shipyard Limited သို့ ရောက်ရှိရာ Goa Shipyard မှ Chairman and Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Sekhar Mitalူ နှင့်တာဝန်ရှိ သူများက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ပြီး တာဝန်ရှိ သူများက ရှင်းလင်းဆောင်တွင် Shipyard နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက် များအား Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Goa Shipyard Limited သို့ ရောက်ရှိရာ ရှင်းလင်းဆောင်တွင် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက Shipyard နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ရှင်းတင်းတင်ပြစဉ်
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် Mr. Sekhar Mital တို့က အထိမ်းအမှတ် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြပြီး Shipyard လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ကြည့်ရှုလေ့လာ ကြရာ တာဝန်ရှိ သူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။
အဆိုပါ Goa Shipyard Limited သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း များတွင် ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြု ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော သင်္ဘောကျင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပေါ်တူဂီ အစိုးရမှ သင်္ဘောများ တည်ဆောက်ရန် အတွက် အသေးစား စက်ရုံအဖြစ် အသုံးပြုရန် Estaleiros Navais de Goa အမည်ဖြင့် စတင်တည်ဆောက် ခဲ့ပြီး ယခုအခါ သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာ များဖြင့် ခေတ်မီစွာ ပြင်ဆင် တည်ဆောက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Shipyard လုပ်ငန်းခွင်ကို တွေ့ရစဉ်
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဂိုအာမြို့မှ ပူနေးမြို့သို့ အိန္ဒိယ တပ်မတော် လေယာဉ်ဖြင့် ဒေသ စံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ထွက်ခွာရာ Fleet Officer,Goa Commanding Area မှ Rear Admiral Ravneet Singh နှင့်ဇနီး၊ တာဝန်ရှိ သူများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၉-၇-၂၀၁၅) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဘန်ဂလိုမြို့ မှတစ်ဆင့် ဂိုအာမြို့သို့ ရောက်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Hindustan Aeronautics Limited မှ ခင်းကျင်းပြသထားသော ယာဉ်များ ၊ စက်ပစ္စည်း များနှင့် Electronic ပစ္စည်းများကို လေ့လာကြည့်ရှုစဉ်
နေပြည်တော် ။ ၂၈-၇-၂၀၁၅
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် အိန္ဒိယလေတပ် ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Arup Raha.PVSM,AVSM,VM ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး သွားရောက်ရန် အတွက် ဇူလိုင် ၂၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ဒေသ စံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ၊ ဘန်ဂလိုမြို့ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား အိန္ဒိယ တပ်မတော်(လေ) ဘန်ဂလို အခြေစိုက် လေတပ် လေ့ကျင့်ရေး ဌာနချုပ်၊ ဌာနချုပ်မှူး Air Marshal Ramesh Rai နှင့်ဇနီး၊ လေယာဉ်စနစ်နှင့် စမ်းသပ် ပျံသန်းရေး ဌာနတပ်မှူး Vice Air Marshal Rajiv Hora နှင့်ဇနီး၊ အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးအောင်ခင်စိုး နှင့်ဇနီး၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်းညွန့်ဦး နှင့်ဇနီး၊ တာဝန်ရှိသူ များက လေဆိပ်တွင် ကြိုဆို နှုတ်ဆက်သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Light Combat Aircraft Manufacturing (LCA လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ အတွင်း ကြည့်ရှု လေ့လာစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ HAWK Final Assembly တွင် စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်စဉ်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် လေယာဉ်ကွင်း မှတစ်ဆင့် Hindustan Aeronautics Limited ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက် လေ့လာသည်။
ရှေးဦးစွာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် Light Combat Aircraft Manufacturing (LCA) သို့ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၂ဝ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိရာHindustan Aeronautics Limited မှ Chairman and Chief of Managing Director Mr. T Subara Raju နှင့် တာဝန်ရှိ သူများက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ပြီး လေယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ အတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှု လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိ သူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား Fleet Officer, Goa Gommanding Area Rear Admiral Ravneet Singh က ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Light Combat Helicopter Manufacturing (LCH) တွင် ကြည့်ရှု လေ့လာစဉ်
ဆက်လက်၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့သည် Light Combat Helicopter Manufacturing (LCH) သို့ လည်းကောင်း၊ HAWK Final Assembly သို့လည်းကောင်း လေ့လာ ကြသည်။
ယင်းနောက် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် Hindustan Aeronautics Limited မှ ခင်းကျင်း ပြသထားသော Bharat Earth Movers Limited ၊ Bharat Electronic Limited ၊ Larsen and Toubro Heavy Engineering တို့မှ ခင်းကျင်း ပြသထားသော ယာဉ်များ ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် Electronic ပစ္စည်းများအား လေ့လာ ကြည့်ရှုရာ တာဝန်ရှိ သူများက ရှင်းလင်း ပြသသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် AKASH Conference Hall သို့ ရောက်ရှိရာ Hindustan Aeronautics Limited ၊ Bharat Electronic Limited ၊ Bharat Earth Movers Limited ၊ Larsen and Toubro Heavy Engineering ၊ TATA Advanced Systems Limited နှင့် Mahindra Defence Land Systems တို့မှ တာဝန်ရှိ သူများက Power Point များဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြကြပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့က သိရှိ လိုသည်များကို မေးမြန်းသည်။
ယင်းနောက် အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်နှင့် လက်ဆောင် များအား အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကြပြီး ပြန်လည် ထွက်ခွာရာ ဘန်ဂလို လေဆိပ်သို့ ဒေသ စံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဒေသ စံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီတွင် ဘန်ဂလို လေဆိပ်မှ ဆက်လက် ထွက်ခွာရာ အိန္ဒိယ တပ်မတော်(လေ) ဘန်ဂလို အခြေစိုက် လေတပ် လေ့ကျင့်ရေး ဌာနချုပ် ဌာနချုပ်မှူး နှင့်ဇနီး၊ လေယာဉ်စနစ် နှင့် စမ်းသပ် ပျံသန်းရေး ဌာနတပ်မှူး နှင့်ဇနီး တို့က လေဆိပ်သို့ ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ဘန်ဂလိုမြို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Kamataka ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၈ ဒသမ ၄၂ သန်းရှိရာ တတိယ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး မြို့ဖြစ်သည်။ Silicon Valley of India ဟု လူသိများသည်။ စက်မှု လုပ်ငန်းများ IT နည်းပညာ ကဏ္ဍတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နာမည် ကျော်ကြားသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စွန့်ဦး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တို့အတွက် အသင့်လျော် ဆုံးသော နေရာဒေသ တစ်ခုတွင် အပါအဝင် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ ဂိုအာမြို့သို့ ဒေသ စံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိကြရာ Fleet Officer, Goa Commanding Area မှ Rear Admiral Ravneet Singh နှင့်တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ခဲ့ကြပြီး မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာကြရာ ခေတ္တ တည်းခိုမည့် Park Hyatt ဟိုတယ်သို့ ရောက်ရှိ ရပ်နားကြ သည်။
ဂိုအာမြို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ကမ်းခြေတွင် တည်ရှိ၍ လူဦးရေ တစ်သန်းခန့် နေထိုင်သည်။ သံရိုင်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ နှင့် ဟင်းခတ် အမွှေးကြိုင်များ အဓိက ထွက်ရှိပြီး ဂိုအာမြို့ရှိ ကမ်းခြေများ၊ ဘုရားဝတ်ပြု ဆုတောင်းသည့် နေရာများသို့ နိုင်ငံတကာ နှင့် ပြည်တွင်း ခရီးသွား ဧည့်သည် အများအပြား လာရောက် လည်ပတ်လေ့ ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် Goa Naval Area ရှိ Venue Officer Mess တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် Fleet Officer, Goa Commanding Area Rear Admiral Ravneet Singh တည်ခင်း ဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲသို့ တက် ရောက်ရန် ခေတ္တ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်မှ ဒေသ စံတော်ချိန် ည ၈ နာရီတွင် မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် ထွက်ခွာရာ Venue Officer Mess သို့ ဒေသ စံတော်ချိန် ည ၈ နာရီ ၂ဝ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိပြီး Rear Admiral Ravneet Singh နှင့်ဇနီး၊ တာဝန်ရှိ သူများက ရင်းနှီး ခင်မင်စွာ ကြိုဆိုကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား Hindustan Aeronautics Limited ၊ Bharat Electronic Limited ၊ Bharat Earth Movers Limited ၊ Larsen and Toubro Heavy Engineering ၊ TATA Advanced Systems Limited နှင့် Mahindra Defence Land Systems တို့မှ တာဝန်ရှိ သူများက Power Point များဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ဂိုအာမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ်
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် Rear Admiral Ravneet Singh တို့က နှုတ်ခွန်းဆက် ကျေးဇူးတင် စကားများ အပြန်အလှန် ပြောကြားပြီး အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ် ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ၏ဇနီးနှင့် Rear Admiral Ravneet Singh ၏ ဇနီးတို့ကလည်း အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး ညစာကို အတူတကွ သုံးဆောင် ကြသည်။
ညစာ မသုံးဆောင်မီနှင့် ညစာ သုံးဆောင် နေစဉ် Goa Naval Area တီးဝိုင်းမှ တေးသီချင်း များဖြင့် တီးခတ်ဖျော်ဖြေ ဧည့်ခံသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ် ရေးထိုးကာ ခေတ္တ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာ၍ ညအိပ်ရပ်နား ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ် ၊ စာ(၁၆/၁၇)